Al Qaacidda Oo si adag u beenisay War uu faafiyay Telefeshinka Al Jazeera.
Cagjar oo shaqada ka Eryay mas'uuliyiin sar sare kuwa kalane xiray.
Dhimashada Carona ee dalka Spain oo 10 Kun gaartay iyo Talyaaniga oo lagu hoobtay.
Mas'uuliyiin katirsan maamulka 'Jubbaland' oo hurinaya dagaal beeleed ka socda duleedka Kismaayo.
'Boko Haram' Oo Weerar Askar badan lagu laayay ka fulisay Wadanka Nigeria.
Askar iyo Saraakiil lagu dilay Muqdisho iyo duleedkeeda.
1000 qof American ah oo maalin gudaheed udhimatay Carona Virus.
Thursday July 18, 2019 - 11:30:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Bayaan kasoo baxay Ururka Al Qaacidda Faraciisa dhulka Jaziiradda Carabta gaar ahaan dalka Yemen ayaa lagu beeniyay warar ishaacaad ah oo uu laba habeen ka hor baahiyay Telefeshinka Al Jazeera ee dowladda Qadar ay maalgeliso.
Al Qaacidda waxay si adag ubeenisay sheegashada Al Jazeera ee ah in Al Qaacidda ay ku lug laheyd weeraro lagu qaaday mucaaradka dowladda Baxreyn ee Shiicada ah "Waxaan si dhammeystiran u beeninaynaa waxa uu buun buuniyay telefeshinka Al Jazeera ee dowladda qadar leedahay ee ah in Qaacidatul Jihaad ay cilaaqaad laleedahay xukuumadda Baxreyn" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Qaacidada Jaziiradda Carabta.
Barnaamijka Maa Khafifa Acdam ee ka baxa Telefeshinka Al Jazeera ayaa lagusoo qaatay Nin udhashay dalka Baxreyn oo lagu sheegay in uu xubin ka yahay Ururka Jihaadiga Alqaacidda islamarkaana uu sirdoonka xukuumadda Manaamah ay uxilsaaray maleeggidda shirqoollo ka dhan ah mucaaradka Baxreyn.
Al Qaacidada Jazeerrada Carabta waxay bayaankeeda ku sheegtay in Telefeshinka Al Jazeera uu caado ka dhigtay ka been sheegidda mujaahidiinta isagoo doonaya in uu raalli geliyo Donald Trump oo sayid u ah dowladaha dawaaqiidda Carabeed.
Ma ahan markii ugu horraysay oo Telefeshinka Al Jazeera uu warar been ah ka sheego Al Qaacidda isagoo isku dayaya in khilaafka kala dhaxeeya Qadar Sacuudiga iyo Imaaraadka uu ku riixo jamaacadan Jihaadiga ah oo caan ku ah in ay la dagaallanto Mareykanka iyo xulufadiisa carbeed.
Ururka Al Qaacidda oo si cajiib leh uga hadlay Musiibada Carona Virus talooyin muhiim ahna udiray Shucuubta Reergalbeedka.
Dhageyso: Sheekh Cali Dheere oo sheegay in ay si adag uga hor tagayaan doorashooyinka dalka laga qaban qaabinayo.
Jihaadiyiinta Al Qaacidda oo Weerar 30 Askari lagu dilay ka fuliyay wadanka Maali.
Hoggaanka Al Qaacidda oo bogaadiyay Heshiis dhaxmaray Taliban iyo Mareykanka [Bayaan].
Xuuthiyiinta oo Shuruudo adag ku xiray wadahadal ay lagalaan dowladaha Carabta.
Dagaalyahannada Al Qaacidda oo dhulka soo dhigay diyaarada uu lahaa Booliska Nigeria.
Bayaan: Al Shabaab oo bogaadisay Weerarkii Al Qaacidda ka fulisay magaalada Pensacola.
Sawirro+Video: Al Qaacidda oo sheegatay Mas'uuliyadda weerarkii Pensacola ee Saraakiisha Americanka ah lagu dilay.
Sawirro: Jihaadiyiinta Al Qaacidda oo Weeraro ka fuliyay Sedax Wadan oo ka dhaca Galbeedka Afrika.
Hoggaanka Ururka Al Qaacidda oo Bogaadiyay Weerarkii saldhigga Mareykanka ee Manda Bay Kenya.